Tombony - Suzhou Springchem International Co., Ltd.
Ekipa manompo matihanina
Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny fungicides simika isan'andro sy eo amin'ny sehatry ny simika simika hafa
Fomba fiasa mahazatra
Manomboka amin'ny fanamafisana ny baiko ka hatramin'ny fanatanterahana azy dia misy rafitra feno hahazoana antoka fa ny mpanjifa dia mandray ny entana milamina sy mahafa-po
Logistics haingana sy azo antoka
Manana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo mpandefa mpitatitra entana matihanina sy orinasam-pitaterana entana mba hahazoana antoka fa mahatratra ny mpanjifa haingana sy azo antoka ny entana.
Ny ekipa mpivarotra
Manana ekipa mpivarotra miakatra ambony izahay, manana traikefa mihoatra ny 10 taona ny rehetra. Fantatray tsara ireo vokatra, azonay atao tsara ny mampahafantatra anao ny vokatra ary manome sosokevitra fandrafetana, hiantohana ny fahombiazan'ny vokatra tsara indrindra. Ny ekipanay dia maniry ny hanome sosokevitra ny vokatra farany sy ny fampiharana ho an'ny mpanjifanay ihany koa.
Manana ekipa mpividy izahay. Ireo mpanjifa fiaraha-miasa maharitra, izahay te-hanohana azy ireo hanitatra ny rojom-panomezana ho an'ireo vokatra angatahin'izy ireo na hanome ny vahaolana tsara indrindra safidiana. Aorian'izany, ny fividianana sy ny fandefasana dia halamina amin'ny fomba mitambatra mba hahatratrarana ny tanjon'ny fitsitsiana ny vidin'ny fitaterana ho an'ny mpanjifa.
Hanolotra mpiasan'ny serivisy mpanolotsaina izahay, ary te hiara-hiasa amin'ny mpanjifa hanao fikarohana eny an-tsena, toy ny fampahalalana momba ny indostria sy ny fironana vaovao. Izahay dia manao, fikarohana an-tserasera, vidin-tsolika, manam-pahaizana momba ny fikambanan'ny orinasa ary toy izany. Maimaimpoana raha tsy misy sarany avy amin'ny antoko fahatelo)